China umatshini wokwenza imaski yomenzi abavelisi bendlebe yokujikeleza umatshini wokujikeleza umatshini mveliso kunye nabenzi | U-Haojing
Lo ngumatshini wentsimbi ye-earband welding onokuthi ujije iibhanti zeendlebe kwelinye icala lesigqumathelo ngexesha. Ubume bentloko ye-welding bunokuhlengahlengiswa ngokohlobo lwemaski lomthengi. Ilungele iimaski ezicaba, iimaski ze-N95, iimaski zekomityi, kunye neemaski zeduckbill.
Izixhobo zixhotyiswe ngeqhosha lokumisa likaxakeka. Xa izixhobo zisilele, zinokumiswa ngokukhawuleza ukuqinisekisa ukhuseleko lwezixhobo kunye nabaqhubi.
I-ultrasonic esetyenziswa kumatshini we-earband welding ngumatshini owaziwayo wasekhaya, onokuqinisekisa ukuba iindawo zokudibanisa iintambo ze-mask indlebe zihle kwaye akuyi kubakho ukungaphumeleli kwe-welding.
Izixhobo zisebenzisa izixhobo ezaziwayo, ezinje ngeSchneider, i-Nokia kunye neAirTAC njalo njalo. Sinako ngokusesikweni izixhobo ngokweemfuno zabathengi.
Phambi kokuba izixhobo zithunyelwe, siya kwenza unyango lokulwa umhlwa kwizixhobo, kwaye sithathe ividiyo yokusebenza, kwaye sibonelele nangeengxaki zezixhobo eziqhelekileyo kunye nezisombululo zokuqinisekisa ukuba abathengi banokuzisebenzisa ngesiqhelo izixhobo.
Ingasetyenziselwa kungekuphela ukujija kweebhanti zeendlebe zeemaski ze-N95, kodwa kunye nokuwelda kwemitya yeendlebe zeemaski ezicaba.
Ubukhulu: 1250mm * 650mm * 1250mm
Amanqaku amabini acofa ngaxeshanye kunye nokudibanisa imaski yeendlebe
Iindawo ezibalulekileyo zezixhobo, ezisetyenziselwa ikakhulu ukuwelda
Indlela yentambo yendlebe inokuhlengahlengisa ukuqina kwentambo yendlebe ukunceda ukulungisa ingxaki
Egqithileyo I-china n95 imaski yokwenza umatshini ubuso imaski indlebe iluphu iwelding umatshini oluzenzekelayo indlebe band umatshini iwelding
Okulandelayo: Umatshini wemveliso yemaski ethe tyaba earloop umatshini womatshini we-earloop umatshini wokujonga imaski
China Zenzekelayo Flat Vuvu Machine
Umatshini wokuGcina uMatshini waseTshayina
Umatshini we-China Mask Ear Loop Welding
China N95 Vuvu Ukwenza Machine
China Ultrasonic Vuel Ukwenza Umatshini
Abavelisi boomatshini beNdlebe abajikeleze indlebe
Indlebe yeluphu yokuwelda umatshini ubuso kobuso
Umboneleli weMatshini yeEarlloop
Umda weNtloko Umtya Wemaski Welding Umatshini Abavelisi
Edge Intloko Umtya Vuvu Welding Machine kuchaphulo olu
Ubuso Vuvu Indlebe yeluphu yeWelding Machine
Ubuso beMaski Earloop Welding Machine Abavelisi
Ubuso beFlat yeMask Machine
Umatshini weMask Flat
Umatshini weFlat yeMask Flat
Abavelisi beMaski eFlat
AbaXhasi boMatshini beFlat yeMask
Flat Imaski Oomatshini
Ukuveliswa kweMaski eFlat
Umatshini weMveliso yeMaski eFlat
Isigqumathelo Indlebe Loop Welding Machine Abavelisi
Isigqumathelo Earloop Welding Machine
Umatshini wokucoca ulwelo wenza umatshini wokwenza iimpahla
China n95 imaski ukwenza umatshini ubuso imaski indlebe loo ...
Umatshini wokuveliswa kwemaski esicwathiweyo